SPM News: Somali 5.10.22
Published May 10, 2022 at 3:59 PM CDT
Nebraska waa musharaxa xisbiga Jamhuuriga oo si weyn loogu tartamay gudoomiyaha Nebraska. Waxaa ka mid ah Charles Herbster oo uu taageeray Donald Trump, kaas oo lagu eedeeyay in uu xamaasaday dumar badan.
Codbixintu waxay muujinaysaa tartanka oo aad ugu dhow inuu u dhexeeyo Herbster, Jaamacadda Nebraska Regent Jim Pillen, iyo Senetarka Gobolka Brett Lindstrom. Ku dhawaad rubuc ka mid ah codbixiyayaashu lama go'aansan. Waxaa jira sagaal musharax oo GOP ah dhammaan.
Qofka ku guulaysta doorashada isreeb-reebka ee xisbiga Jamhuuriga waxa uu wajihi doonaa qofka ku guulaysta isreebreebka Dimuqraadiga. Senator-ka gobolka Carol Blood of Bellevue ayaa la filayaa inuu si fudud u garaaco Roy Harris ee Lindwood. Sidoo kale warqadda codeynta waxaa ku jira musharaxa Libertarian iyo macalinka degaanka Omaha Scott Zimmerman.
Codbixiyayaasha Nebraska ayaa sidoo kale soo magacaabi doona musharrixiinta bedeli doona Congress-kii hore, Republican Jeff Fortenberry. Waxaa lagu xukumay bishii Maarso eedeymo uu uga been sheegay mas'uuliyiinta federaalka ee ku saabsan tabarucaad olole sharci darro ah oo uu ka helay bilyaneer reer Nigeria ah.
Qaabka cimilada Iowa ayaa samaynaysa isbeddel weyn usbuucan, laga bilaabo qabow iyo roobka ilaa kulayl iyo qoyan, taasoo kor u qaadaysa welwelka la yaqaan ee abaaraha.
Adeegga Cimilada Qaranka ayaa sheegaya in saadaasha qaar ay muujinayaan soo fiicnaanshaha guud ahaan webiga Missouri bilaha soo socda.
Iyadoo heerkulka sare ee Iowa usbuucii hore uu ahaa inta badan 40s, 50s, iyo 60s, waxaan arki doonaa heerkulka 90s usbuucan.
Saadaasha ayaa filayey in qaabka cimiladu La Nina uu meesha ka baxayo dhawrkii bilood ee la soo dhaafay, laakiin taasi ma dhicin.
Khariidadda Daba-galka Abaaraha ee Maraykanka ee loo soo saaray Iowa dabayaaqadii todobaadkii hore ayaa muujisay saddex degmo oo ku yaalla waqooyi-galbeed Iowa oo ay ka jiraan abaar daran. Waxay yihiin Woodbury, Plymouth, iyo Monona.
Dugsiga Xaafada Sioux City ayaa ku dhawaaqay qorshayaasha xafladaha qalin jebinta ee sanadkan. In ka badan 900 oo arday ayaa la sharfi doonaa Sabtida, Meey 28-keeda, oo ay ku jiraan fasalka koowaad ee qalin-jabinta ee VIBE Academy, dugsiga farsamada ee degmada oo furmay dayrtii sannadkii hore.
North High waxay bilaabataa maalinta 11:00 subaxnimo, waxaa ku xiga West iyo VIBE Academy 2:30 p.m. iyo Bariga Sare 6pm